Any Georgia, nandresy tamin’ny fifidianana fihodinana faharoa ny antoko Dream Party · Global Voices teny Malagasy
Nandresy tamin'ny fifidianana indray ny antokon'ny fitondrana ao Georgia
Voadika ny 15 Novambra 2021 4:20 GMT
Mpitarika ny United National Movement niresaka tamin'ny mpanao fihetsiketsehana nandritra ny famoriam-bahoaka tamin'ny 31 Oktobra. Pikantsary avy amin'ny tatitry ny lahatsary Radio Liberty Georgia Service.
Nilaza ho nandresy ny antoko Georgian Dream tamin'ny 30 Oktobra rehefa nikatona ny fifidianana fihodinana faharoa tao Zeorzia manerana ireo tanàndehibe miisa dimy lehibe indrindra ao amin'ny firenena — Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Poti, ary Rustavi. Natao tao anatin'ny tontolon'ny krizy politika naharitra nanomboka hatramin'ny volana Oktobra 2020 ny fifidianana tao an-toerana, rehefa nanohitra ny fandresen'ny antokon'ny fitondrana Georgian Dream tamin'ny fifidianana parlemantera ireo vondrona mpanohitra. Mampiseho ny valim-pifidianana vonjimaika nambara tamin'ny 31 Oktobra, avy amin'ny Komitin'ny Fifidianana Foibe fa nahazo sezan'ny ben'ny tanàna miisa 19 tamin'ny 20 ny antoko Georgian Dream. Nanao fiampangana ny antoko mpanohitra fa nisy ny hala-bato.
Taorian'ny fanambarana ny voka-pifidianana, nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny parlemanta tao Tbilisi renivohitra ny antoko mpanohitra. Nikabary tamin’ny vahoaka mpanohitra ny mpitarika ny United National Movement, Nika Melia, hoe: “Mihevitra foana ny governemanta fa nandresy omaly. Handresy tsy ho ela ny vahoaka Zeorziana.” Niantso hanaovana fihetsiketsehana faobe tamin'ny 7 Novambra ihany koa i Melia “izay tsy nitovy tamin'ireo fihetsiketsehana rehetra teo aloha”. “Hijery ny halehiben'ny fihetsiketsehana izao tontolo izao, izay hatao ao amin'ny Kianjan'ny Fahalalahana eo amin'ny lalamben'i Rustaveli amin'ny Alahady [7 Novambra],” hoy ny voady nataon'ny mpitarika ny antoko mpanohitra.
Naroso tamin'ny 6 Novambra avy eo ny fihetsiketsehana.
Notsikerain'ny Delegasionan'ny Vondrona Eoropeana ny fifidianana fihodinana voalohany, natao tamin'ny 2 Oktobra, ary koa ny iraka misahana ny fanaraha-maso avy amin'ny Fikambanana ho an'ny Fiaraha-miasan'ny Fiarovana any Eoropa (OSCE), biraon'ny mpanara-maso ny andrim-panjakana demokratika sy ny zon'olombelona (ODIHR). Nanatsoaka hevitra ny vondrona tao anatin'ny fanambarana navoakan'ny Delegasionan'ny Vondrona Eoropeana niaraka tamin'ny masoivohon'ny firenena mpikambana, fa na dia “voafehy tamin'ny ankapobeny” aza ny fifidianana, dia voamariky ny “fisaraham-bazana henjana”.
Tamin'ny fanambarana vaovao nivoaka tamin'ny 31 Oktobra, nilaza i Carl Hartzell, ambasadaoron'ny Vondrona Eoropeana any Georgia fa “raha toa ka tsara ny fitantanana ny fifidianana tamin'ny ankapobeny hoy izy”, ny fanambarana dia nanakiana ny governemantan'ny fitondrana tamin'ny “kabary miiba hatrany, ny fiampangana tsy mitsahatra tamin'ny fandrahonana sy ny fanerena ny mpifidy ary ny elanelana mahery vaika teo amin’ny loharanom-bola, izay nahazoan’ny antokon’ny fitondrana tombony ary nampitongilana ny kianja filalaovana”.
Hoy i Albert Jónsson, izay nitarika ny iraka mpanara-maso ny fifidianana ODIHR, hoe : “Nisy lesoka maromaro niharihary teo amin'ny fiantombohan'ny fihodinana faharoa na dia voalamina tsara sy mangarahara aza ireo fifidianana ireo, raha nitombo hatrany ny fifanandrinana sy ny fitarainana tamin'ny fanerena sy ny fandrahonana.”
Namoaka fanambarana ihany koa ny Masoivohon'i Etazonia any Georgia naneho hevitra amin'ny herisetra, milaza ry zareo fa “manahirana ny tatitra mari-pototra momba ny herisetra mihatra amin'ireo mpanara-maso ny fifidianana sy ny fampitam-baovao nandritra ny fihodinana faharoa tamin'ny fifidianana”.
Nanao fanadihadiana maromaro momba ny herisetra tsikaritra tamin'ny 30 Oktobra ny Minisiteran'ny Atitany .
Natao tamin'ny fotoana niandrasan'ny filoha Zeorziana teo aloha, Mikheil Saakashvili, ny fotoam-pitsarana tany am-ponja ny famerenana ny fifidianana. Nanao fitokonana tsy nihinan-kanina nanomboka ny 1 Oktobra ity mpitarika politika teo aloha ity. Na dia teo aza ny tatitra fiharatsian'ny fahasalamany, tsy nety namindra azy tany amin'ny tobim-pahasalamana mba hitsaboana azy ny fitondrana. “Tiako ho fantatrareo fa miankina tanteraka amin'ny safidy izay hataonareo rahampitso ny fanalavana ny fiainako,” hoy i Saakashvili nanoratra tao amin'ny taratasy nalefany tamin'ny alàlan'ny mpisolovavany mialoha ny latsa-bato araka ny filazan'ny OC Media.
Roa andro mialoha ny fifidianana, voalaza fa nilaza ny praiminisitra Zeorziana Irakli Garibashvili fa “nanan-jo hamono tena” ny filoha teo aloha, tamin'ny antsafa tamin'ny fahitalavitra ny hariva. Tamin'io antsafa io ihany, nilaza ihany koa ny praiminisitra fa efa nikasa hamono mpitarika mpanohitra maromaro ny mpanohitra.
Na dia mikasa ny hanohitra ny voka-pifidianana any amin'ny faritra sasany aza ny mpanohitra, ny ifantohana kosa amin'izao fotoana izao eny amin'ny fitsarana dia toa eny an-dalambe hoy ny mpanao gazety Joshua Kuchera tao amin'ny lahatsorany Eurasianet, miomana hanao famoriam-bahoaka maromaro kasaina atao manerana ny firenena.
Kazakhstan 4 andro izay